ကလိုင်ဟာ အပင်တွေကို စကားပြောတယ် - Contes pour le français langue seconde
ကလိုင်ဟာ အပင်တွေကို စကားပြောတယ် Khalai parle aux plantes
သူဟာ ကလိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နာမည်ဟာ “ကောင်းတဲ့သူ”လို့ သူ့ရဲ့ လူဘူကူဆူ ဘာသာစကားမှာ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Voici Khalai. Elleasept ans. Son nom signifie « celle qui est bonne » dans sa langue, le lubukusu.
ကလိုင်ဟာ နိုးလာပြီး လိမ္မော်သီးပင်ကို စကားပြောပါတယ်။ “လိမ္မော်သီးပင်လေးရေ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အမြန်ကြီးလာပြီး မှည့်တဲ့ လိမ္မော်သီးတွေ အများကြီးပေးပါလား” လို့စကားပြောပါတယ်။
Khalai se réveille et parle à l’oranger. « S’il-te-plait oranger, grandis et donne-nous beaucoup d’oranges mûres. »
ကလိုင်ဟာ ကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားပါတယ်။ လမ်းမှာ သူဟာ မြက်ပင်လေးတွေနဲ့ စကာားပြောပါတယ်။ “မြက်ပင်လေးရေ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ပိုမိုစိမ်းလန်းလာပြီး မခြောက်သွေ့သွားပါနဲ့” လို့ပြောပါတယ်။
Khalai marche à l’école. En chemin, elle parle à l’herbe. « S’il-te-plait herbe, deviens plus verte et ne sèche pas. »
ကလိုင်ဟာ ပန်းရိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်သွားတယ်။ “ပန်းကလေးတွေရေ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ပွင့်လန်းနေပေးပါ။ ဒါမှ ငါ့ခေါင်းပေါ်မှာ ပန်လို့ရမှာ” လို့စကားပြောပါတယ်။
Khalai passe vers des fleurs sauvages. « S’il-vous-plait fleurs, continuez à fleurir pour que je puisse vous porter dans mes cheveux. »
ကျောင်းမှာတော့ ကလိုင်ဟာ ကျောင်းဝင်းအလယ်မှာရှိတဲ့ အပင်လေးကို စကားပြောပါတယ်။ “အပင်လေးရေ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အကိုင်းတွေ ဖြာကျလာပေးပါ။ ဒါမှ အရိပ်မှာ စာဖတ်လို့ရမှာ” လို့ပြောပါတယ်။
À l’école, Khalai parle à l’arbre au centre du camp. « S’il-te-plait arbre, fais pousser de grandes branches pour que nous puissions lire sous ton ombre. »
ကလိုင်ဟာ ကျောင်းပတ်လည်မှာရှိတဲ့ ခြံကာမြက်တွေကိုလည်း စကားပြောပါတယ်။ “ကျေးဇူးပြုပြီး သန်မာစွာ ကြီးလာပြီး လူဆိုးတွေ ဝင်လာတာကို တာဆီးပေးပါ” လို့ပြောပါတယ်။
Khalai parle à la haie qui entoure son école. « S’il-te-plait, deviens robuste et empêche les personnes méchantes d’entrer. »
ကလိုင်ဟာ ကျောင်းကနေ အိမ်ကို‌ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ လိမ္မော်ပင်ဆီကို သွားလည်ပါတယ်။ “လိမ္မော်သီးတွေ မမှည့်သေးဘူးလား” လို့ ကလိုင်က မေးပါတယ်။
Quand Khalai retourne chez elle de l’école, elle visite l’oranger. « Est-ce que tes oranges sont mûres ? » demande Khalai.
ကလိုင်ဟာသက်ပြင်းချပြီး “ဒီလိမ္မော်သီးတွေဟာ စိမ်းနေတုန်းဘဲ” လို့ပြောပါတယ်။ “မနက်ဖြန်ကျရင်တွေ့မယ်နော် လိမ္မော်ပင်လေး၊ အဲ့ဒီအချိန်ဆို ငါ့အတွက် လိမ္မော်သီးမှည့်လေးတွေရှိမှာပါ” လို့ ကလိုင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
« Les oranges sont encore vertes, » soupire Khalai. « Je te verrai demain oranger, » dit Khalai. « Peut-être que demain tu auras une orange mûre pour moi ! »
Illustré par: Jesse Pietersen
Traduit par: Naw Thazin Hpway
Source: Khalai talks to plants du Livre de contes africains
ဖယောင်းကလေးများ ဘာကြောင့် ရေမြင်းမှာ အမွှေးမရှိရတာလဲ။ ဇမားဟာ သိပ်တော်တယ် ဆုံးဖြတ်ချက် ငှက်ပျောသီးသည်တွမ် တင်ဂီနှင့်နွားများ အပြစ်ပေးခြင်း ဆိတ်၊ ခွေး နဲ့ နွား ဘောလုံးကြယ်ပွင့်လေး အန်းဒီစဝါ အရပ်ရှည်သောလူကြီးတစ်ယောက်